8 Best Automotive WordPress Mowduucyada | BehMaster
Bogga ugu weyn/WordPress/8-da Mowduucyada Baabuur ee WordPress ee ugu Wanaagsan
Ganacsiga waxaa muhiim ah in aad hormariso cagtaada ugu fiican, oo ay ku jirto mareegahaaga. Haddii aad iibiso, iibsatid, kiraysato ama dayactirto baabuurta waxa si gaar ah muhiim u ah in aad haysato shabakad mobile-ku saaxiibka ah oo si fudud loo isticmaali karo. Haddii qof uu isku dayayo inuu helo baabuurka riyadiisa waa inuu ahaadaa mid fudud sida isticmaalka shaandhada la beegsaday. Ama haddii ay u baahan yihiin inay u soo galaan laxanka, waa inay jirtaa hab dareen leh oo lagu xusho adeeg oo wakhti loo ballansado.
Nasiib wanaag iyada oo WordPress uu leeyahay sifooyinka saxda ah ee ganacsigaaga baabuurtu way fududahay sida xulashada mawduuca saxda ah. Maanta waxaan eegi doonaa qaar ka mid ah mawduucyada baabuurta WordPress ugu fiican (aragti ahaan) suuqa. Markaa haddii aad leedahay shirkad iibisa, bixisid kiro, maareyso dayactirka ama xitaa aad maamusho adeegga raacitaanka mawduucyadan baabuurtu waa hubaal inay ku habboon yihiin ganacsigaaga.
The Motors Car dealership premium mawduuca WordPress waa sahlan yahay, wuxuu leeyahay qani oo ku haboon iibinta baabuurta online. Iibsadayaashu waxay rabaan inay wax ka iibsadaan agagaarka, waxaad doonaysaa inay yimaadaan baabuurkaaga badan, Motors-kuna waa mawduuc aad u wanaagsan inuu kugu xidho iyaga.
Maxaa Motors ka dhigaya mid aad ugu wanaagsan dhisida degel loogu talagalay iibinta baabuurtaaga? Hagaag, waxaa jira 38 Custom Stylemix Shortcodes oo loogu talagalay ganacsatada baabuurta. Iyada oo lagu daray ikhtiyaarrada xisaabiyeyaasha amaahda, liisaska, markhaatiyaasha, MPG baabuur keliya, adeegyo, dalabyo gaar ah, macluumaadka farsamada, liiska baabuurta, qiimaha baabuurka iyo waxyaabo kaloo badan. Marka lagu daro laxamiistaha muuqaalka, waxaad jiidi kartaa oo aad dhigi kartaa bog kasta oo aad uga baahan karto goobta gaadhigaaga.
Intaa waxaa dheer, waxaa jira tiro badan oo ikhtiyaari ah oo loogu talagalay dhammaan sifooyinkaas. Waxaa jira 5 maqaar oo midab leh oo kaa caawinaya inaad bilowdo, laakiin waxaad isticmaali kartaa fursadaha midabada, farta Google, qaabka goobta (buuxa ama sanduuq) iyo in ka badan si aad u abuurto muuqaal gaar ah.
Laakiin sug, waxaa jira wax ka badan! Heme waxa kale oo ka mid ah astaanta “Iibinta Gaadhiga” halkaas oo isticmaalayaashu ay soo gudbin karaan baabuurtooda, isbarbardhigga gaadhiga si ay uga caawiyaan macaamiisha inay go’aan gaadhaan, CSV soo dejinta ikhtiyaarka alaabtaada, iyo xitaa faylasha PSD (waa weyn haddii aad rabto inaad ku ciyaarto qaabka ka hor intaadan bilaabin. goobtaada).
2. Gawaarida Gawaarida
AutoTrader waa mawduuca ka iibinta baabuurta ee casriga ah oo nadiif ah oo casri ah. Mawduucani wuxuu ku fiican yahay iibinta baabuurta, kiraynta baabuurta, baabuurka badan ee la isticmaalo, ama joornaalka baabuurta ee internetka ama blog.
Mawduucan waxaa ka buuxa astaamo aad u wanaagsan si ay u sahlanaato dhismaha degelkaaga diiradda saaraya. Ugu horreyntii, AutoTrader waxay leedahay qayb liisaska fantastik ah. Ku dar dhammaan alaabadaada baabuurta oo ay ku jiraan dulmar tifaftiran, sharraxaad, qiimihiisu, qolal sawiro, foomka xidhiidhka, iyo foom "la wadaag saaxiib". Intaa waxaa dheer waxaad ku dari kartaa shay gaar ah dallacaad ama qiimo dhimis. AutoTrader sidoo kale waxaa ku jira raadinta horumarsan oo ka faa'iideysaneysa dhammaan macluumaadka aad ku darto.
Adeegyadu waa qayb kale oo weyn oo mawduucan ah. Ku dar macluumaadka ku saabsan dammaanadahaaga la dheereeyey, qorshayaasha adeegga, dukaanka dayactirka ama wax kale. AutoTrader waxa kale oo ka mid ah bogag bogag ah oo faa'iido leh, blog, widgets, furaha gaaban, menus mega, menus navigation oo badan iyo in ka badan.
Dealership waa iibiyaha baabuurta casriga ah mawduuca ugu sarreeya ee WordPress oo ay naqshadaysay Mawduucyada Gorilla. Mawduucani waxa uu fududaynayaa in loo sameeyo goob mareegaha iibiya baabuurta si ay maanta u bilaabaan kor u qaadida agabka baabuurtaaga!
Macaamiisha intooda badani waxay baadhaan iibsiyo waaweyn ka hor inta aanay u bixin inay sameeyaan. Haddii aad leedahay shirkad iibisa tani waxay la macno tahay in macaamiishaada mustaqbalka ay dib u eegis ku sameynayaan doorashadooda ka hor inta aysan cagta saarin baabuurka badan. U hel ganacsigaaga adoo dejinaya degel adoo isticmaalaya Dealership, halkaas oo aad ku tusi karto macaamiisha dhammaan baabuurta waaweyn iyo dalacsiinta aad leedahay. Oo haddii aad u soo guurto Xirmada Deluxe, Gorilla Themes ayaa xitaa ku rakibi doonta mawduuca adiga oo kuu sahlaya in aad waligaa bilowdo.
Ganacsi-ganacsiyeedka waxaa loogu talagalay ka-ganacsiga baabuurta wuxuuna leeyahay dhammaan gambaleelka iyo foodhida aad u baahan tahay si aad uga dhex muuqato tartamayaashaada. Muuqaalka muhiimka ah waa taageerada liisaska iyo raadinta liisaska sare. Sidan waxaad ku dari kartaa dhammaan alaabadaada oo waxaad siin kartaa isticmaaleyaasha ikhtiyaarrada ay ku raadiyaan baabuurkooda saxda ah samaynta, moodeelka, qiimaha, xaaladda, sanadka iyo nooca gaadhiga. Waxaa dheer noocyada Premium iyo Deluxe ee mawduuca waxaa ka mid ah is dhexgalka Craigslist si aad u abuuri karto xayeysiis qurxoon dhejisyada Craigslist dhawr dhagsi oo keliya.
Waxa jira astaamo kale oo badan oo waaweyn mawduucan iibiyaha baabuurta. Mawduuca waxaa ku jira 5 maqaar oo midab leh, is dhexgalka YouTube & Vimeo, si buuxda ayaa loo meeleeyay, waxaana ku jira is dhexgalka Facebook.
4. Noocyada Baabuurka
Qaybaha Baabuurku waa mawduuc WordPress ah oo qiimo leh oo u nashqadeeyay PremiumPress gaar ahaan ka ganacsiga baabuurta iyo waxyaabo badan. Si degdeg ah ugu iibi alaabtaada shabakad qurux badan oo si gaar ah loogu talagalay iibinta baabuurta.
Ku iibinta baabuurta ganacsi adag - hadday yihiin kuwo cusub ama la isticmaalay. Macaamiisha si fiican ayaa loo wargeliyay, waxayna si weyn u raadinayaan baabuurka ay rabaan. Haddaba maxaad u samayn wayday shaqadaada in yar oo fudud, oo isticmaal Qaybaha Baabuurka si aad u hesho mareegta ganacsigaaga si degdeg ah. Iyada oo tiro badan oo astaamo ah oo lagu daro alaabadaada oo dhan, macaamiishu waxay qiyaasi karaan waxay u malaynayaan inay rabaan si aad uga caawiso inay go'aan kama dambays ah shaqsi ahaan u gaadhaan.
Qaybaha Baabuurku waxay leeyihiin doorashooyin fiican oo aad hubto inaad jeceshahay. Bilaabidda waa sahlan tahay maadaama aad ka soo dhoofsan karto (oo dhoofin karto) dhammaan liiskaaga CSV, iyo jiidista iyo tuurista bogga wax dhisuhu waxay ka dhigan tahay inaad samayn karto aragti cajiib ah marka hore qaabka bogga hoyga ee aad rabto. Noocyada Baabuurka waxa kale oo ka mid ah xulashooyin waaweyn oo liisaska ah oo ay ku jiraan shaxda tafaasiisha, sharraxaadda, wadaagga, Khariidadda Google, miiska daawashada iyo baabuurta la xidhiidha.
Astaamaha kale waxaa ka mid ah raadinta horumarsan, widgets gaarka ah, taageerada xirmooyinka xubinnimada isticmaale, ikhtiyaarka isticmaalayaasha si ay u soo gudbiyaan liisaska, maamulaha warsidaha iimaylka iyo tiro badan oo ikhtiyaar ah si loo habeeyo mawduucaaga.
Baabuurtu waa mawduuc WordPress ah oo qiimo leh oo loogu talagalay soo bandhigida baabuurta. Waa mowduuc aad u wanaagsan milkiilayaasha garaashka ama milkiilayaasha baabuurta kuwaas oo raba inay baabuurtooda ku soo bandhigaan khadka oo ay helaan su'aalo ku saabsan baabuurtaas.
Baabuurtu waxa ay la socotaa bog guri oo si buuxda wax loo beddeli karo oo si fudud loo beddeli karo iyadoo la isticmaalayo widgets firfircoon, oo ay ku jiraan caadooyin badan oo loo dhisay mawduucan. Waxa ay la socotaa cashuuro badan oo caado ah taas oo sahlaysa in baabuur lagu daro mawduucaaga oo loo habeeyo qaybo.
Bogga liisaska baabuurka ayaa u oggolaanaya booqdayaasha inay si fudud u dhex maraan dhammaan baabuurta la heli karo iyo bogga faahfaahinta baabuurka ayaa ku habboon soo bandhigida baabuurta leh sawir muuqaal ah, soo koobid, astaamo iyo is-dhexgalka fiidiyowga.
CarDealer waa a auto dealer auto premium mawduuca WordPress oo aad isticmaali karto si kor loogu qaado alaabta baabuurkaaga onlayn. Kani waa mawduuc weyn oo loogu talagalay iibiyeyaasha, iibiyeyaasha badan ama iibiyeyaasha kale.
Iibka baabuurtu waa inuu ahaadaa mid fudud oo madadaalo u ah iibsadayaasha, waana sababta aad u hubiso inaad haysato degel cajiib ah ganacsigaaga baabuurta. CarDealer waa hab fiican oo lagu noqon karo 100% togan in website-kaagu aanu ahayn mid saaxiibtinimo oo keliya, laakiin wuxuu leeyahay dhammaan sifooyinka aad u baahan tahay si aad u dhisto oo aad u maamusho goobtaada iyada oo aan wax dhib ah lahayn.
CarDealer waxaa ku jira astaamo aad u wanaagsan sida profile-ka isticmaalaha, calamadaha sawirka (sidaas darteed qofna kama qaadi karo sawiradaada khabiirka ah oo sheegan karo inay iyagu leeyihiin), kayd buuxa oo baabuurta sameeya, moodooyinka, wadamada iyo gobolada iyo qaar kaloo badan. Mawduuca waxa kale oo ka mid ah widget aad u horumarsan oo xoog leh si iibsadayaashu ay u heli karaan baabuurkooda riyadooda goobta, samaynta, moodelka, qiimaha, sanadka, masaafada, midabka, albaabada, iwm. waa.
Intaas kuma koobna. Mawduucan waxa kale oo ka mid ah xulashooyin badan oo qaabaynta oo ku jira muraayadda mawduuca, bogga isbarbardhigga baabuurta, calaamadaha baabuurta "Featured" iyo "Iibka", bogagga liiska baabuurta ee la sifayn karo, tifaftiraha ikhtiyaarka baabuurta, moduleka PayPal ku dhex jira, miisaska qiimaha iyo wax ka badan .
7. RPM Baabuurka iibiya
RPM – Ganacsiga Baabuurta Baabuurta ee Ganacsiga Bogga Degista ee WordPress wuxuu ku fiican yahay ganacsiyada baabuurta ama isticmaalayaasha gaarka ah ee raba inay iibiyaan baabuurtooda sida baabuurta iyo mootada. Xitaa waxaad u isticmaali kartaa mawduuca baabuurta fikradda ah iyo kirooyinka sidoo kale! Waxaad u abuuri kartaa bog kasta oo soo degista alaabta baabuurta leh RPM.
Mawduuca RPM waxa lagu dhisay Qaab-dhismeedka Redux waxa kale oo ay taageertaa bog-dhisayaasha sida Laxanka Muuqaalka, SiteOrigin, Unyson iwm. Markaa waxaad samayn kartaa aragti kuu gaar ah dhisme kasta oo bogag ah oo aad ku qanacsan tahay. Laakiin haddii aad rabto naqshaddaada sida demo-ga, waxaanu sidoo kale ku siinnaa nuxurka demo oo aad ku rakibi karto si aad dhakhso u bilowdo.
Mawduuca ayaa sidoo kale si buuxda uga jawaabaya, oo lagu daray waxaa jira tiro badan oo ikhtiyaari ah oo habaynta dhammaan sifooyinka mawduucyada. RPM waxa ay la socotaa qaar ka mid ah plugins premium qaali ah sidoo kale. Mawduucani waxa uu la socdaa foomka xidhiidhka tartanka, warside rukun, midab dooriye aan xadidnayn iyo far Google oo aan xadidnayn.
Wareejintu waa baabuur cajiib ah oo loogu talagalay kireysiga lacagta WordPress theme ku habboon baabuurta magaalada, limo iyo adeegyada tagaasida. Mawduucan kaliya maaha mid casri ah laakiin sidoo kale waxa uu la socda jadwal ballansan oo si buuxda u shaqaynaya si ay ugu fududaato macaamiisha inay doortaan oo ballansadaan adeegyadaada.
Dadku waxay u baahan yihiin inay helaan meelo, waxayna rabaan inay si hufan u gaadhaan halkaas. Iyada oo la adeegsanayo Wareejinta mawduuca WordPress waxaad abuuri kartaa xarrago leh oo sahlan in la isticmaalo degel adeeg gaadiid oo macaamiishu ku soo laaban doonaan. Habka ballan-qaadka ee ku dhex jira waa sahlan tahay in la isticmaalo, si macaamiishu waqti u qabsan karaan, oo ay u doortaan qaabka gaadiidkooda oo ay ku socodsiiyaan lacag-bixintooda dhawr tillaabo.
Sifooyinka kale ee weyn ee Wareejinta waa inta ikhtiyaar ee jira marka la dhisayo adeegyadaada. Waxaad ku dari kartaa noocyada baabuurta aan xadidneyn (taksi, baabuur magaalada, limo, SUV - wax kasta), kordhin aan xadidneyn (sida bacaha, joogsiyada, champagne, iwm) iyo meelo aan xadidneyn (oo lagu daro waxaad ku dari kartaa kala sareynta). Markaa wax kasta oo aad bixiso, iyo meel kasta oo aad bixiso, waxaad ku dari kartaa boggaaga.
Wareejintu waxa kale oo ay leedahay qaab si buuxda uga jawaabaya, taas oo ah lama huraan maadaama macaamiisha intooda badani u isticmaalaan moobilkooda si ay u ballansadaan raacitaanka. Iyo habaynta mawduuca waxay la socotaa 15 harag midab ah oo horay loo sameeyay oo leh xulashooyin midab aan xadidnayn, guddi maamul oo gaar ah oo ay ka buuxaan xulashooyin mawduucyo ah, iyo widgets badan oo caado ah oo lagu daro dhinacyadaaga aan xadidnayn.
Dhammaan mawduucyada kor ku xusan waxaa ka mid ah sifooyin waaweyn oo loogu talagalay ganacsigaaga baabuur, habaynta sahlan iyo taageerada qaaliga ah ee aad u baahan tahay caawimaad kasta. Waxaan rajeyneynaa inaad awooday inaad hesho waxaad raadineysay. Laakiin haddii aad ka heshay mawduuc baabuur oo ka duwan laakiin la siman oo cajiib ah meel kale noogu sheeg waxa ku saabsan qaybta faallooyinka ee hoose.
Maxay SEO-yadu ka baran karaan isbeddelka darajooyinka COVID [Video]